Xigashooyinka Anime ee ugu Fiican ee ku saabsan Dabeecadda oo kaa dhigi doonta inaad ka fikirto! - Kale
25ka xigasho Anime ee ugufiican ee ku saabsan 'Dabeecada' Taas ayaa kaa dhigi doonta inaad ka fikirto
Dabeecadda waa eray u qaybsan 2 qaybood.
“Dabeecada” sida ay wax u yihiin iyo dadkuba.
Iyo 'dabeecadda' lafteeda, sida gudaha - dhulka, xayawaanka, iwm.
Qoraalkan waxaad ka heli doontaa xigashooyin matalaya labada qeexitaan. Laga soo qaatay daraasiin jilayaal anime ah oo laga soo qaatay bandhigyo badan oo anime ah
Uguyaraan dhowr xigashooyin ayaa ku siin doona wax aad ka fikirto, waxna ka qaaddo.
halka laga daawan karo ingiriisida loogu magac daray anime
Xigashooyinka Anime ee ku saabsan Dabeecadda:
Quachi Itachi Uchiha (Naruto)
'Kuwa iscafiya naftooda, oo awooda inay aqbalaan dabeecadooda dhabta ah ... Iyagu waa kuwa xoogga leh!' - Itachi Uchiha
Xigashooyinka Shinichi Izumi
'Markaad dareento noloshaada inay khadka kujirto, dabeecaddaada dhabta ah ayaa dusha sare mareysa.' - Shinichi Izumi
Sakagami Takumi Quotes (Heesta Qalbiga)
“Hagaag, heesaha, ama muusiga… Waxaan u maleynayaa in dabiiciyan markasta loola jeeday in wax la gudbiyo. Marka haddii ay jiraan wax aad rabto inaad tiraahdo, miyaanay kula ahayn inaad isku daydo inaad u heesto? ” - Sakagami Takumi
Xigashooyinka Tanaka (Tanaka Kun Had iyo jeer Liis Gaarin)
“Cimilada ayaa wanaagsan oo neecawda ayaa wanaagsan. Shimbiraha yaryar ayaa samaynaya dhawaqooda cute. Waxaa laga yaabaa in dadku maalmahan ilaaween sida dabeecadda cajiibka ahi u tahay… Haa, miyaadan u malayn inay qashin tahay inaadan ku dareemin jirkaaga oo dhan sidan oo kale? - Tanaka
Takashi Natsume Xigasho
Dabeecadda lafteeda waa wax aan macquul ahayn. Dadku waa kuwa kaliya ee ka gunuunaca arrintaas. ” - Takashi Natsume
Isshin Saito Quotes (Baadhis maskaxeed Yakumo)
Aadanaha oo dhami qof kale ayaa jecel oo waxay la dhisaan shucuur iyaga la mid ah. Taasi waa bixinta dabiiciga. Ma jirto wado ku wareegsan. Waana macno la’aan in la isweydiiyo. ” - Isshin Saito
anime ugu fiican dhamaan waqtiga
Shougo Makishima Quotes (Cilmi-nafsi)
Markuu ninku wajaho cabsi, naftiisu waa tijaabiysaa. Waxa uu ku dhashay raadinta… waxa uu ku dhashay si loo gaaro… dabeecadiisa runta ah ayaa soo cadaan doonta. ” - Shogo Makishima
Syamaya Saki Quotes (Maqaalka Jacaylka Maskaxda)
“Qof walba wuxuu muujiyaa wajigiisa dhabta ah albaabka geerida. Xitaa mudaneyaal sharaf leh ayaa tuuri doona mabaadi'diisa si ay dhulka uga dawarsadaan. Xitaa marwo naxariis iyo dabacsan ayaa ku bilaabi doonta habaarka wejiga sida midka jinniga oo kale. Xitaa nin nacasnimo iyo kaftan badan wuu aqbalidoonaa geerida isagoon wax calaacal ah lahayn… Taasi waa waxa aan aaminsanahay –Qiyaasta geerida kahoraysa ayaa ah goorta lasoo bandhigi doono dhamaan noocyada dabeecadaha dhabta ah. ” - Syamaya Saki
Xigashooyinka Boogiepop (Boogiepop Phantom)
Dabeecadda aadanaha ayaa dafiraysa wixii la soo dhaafay si ay qiil uga dhigato waxa jira. Laakiin miyaad rumaysan tahay inay jiraan wax xilligan xaadirka ah qiil u leh. ” - Boogiepop
Xigasho Wakabayashi Hatsuna (Brynhildr In The Darkness)
Aadamuhu si fudud buu u khiyaaneeyaa dadka kale. Taasi waa uun dabeecadda iyaga ka mid ah. - Wakabayashi Hatsuna
Xigashooyinka Souhei Saikawa (Xogta Wanaagsan)
Marka la arko dabeecadda oo loo maleeyo inay qurux badan tahay waa wax aan dabiici ahayn. Taas macnaheedu waa nolosha aad ku nooshahay waa mid aan nadiif ahayn. Haddii aad naftaada ka goyn karto dabeecadda hooyo oo aad sii noolaan karto, macnaheedu maahan inaad leedahay qurux gudaha kuugu filan oo kuu oggolaanaya inaad taas sameyso? ” - Souhei Saikawa
Xigasho Shionji Yuuko (Cirridka Memo Pad)
anime fiican oo lagu daawado af ingiriisi
'Inta badan dadka aan ahayn NEET ee adduunka ma oga in dabeecadda aadanuhu aysan aheyn mid cabsi leh, laakiin waa vectorial.' - Shionji Yuuko
Magata Shiki Quotes (Amarka saxda ah)
“Qof kasta oo bani’aadam ah wuxuu saameeyaa deegaanka ku xeeran Laakiin aadanuhu uma jiraan waxyaalaha iyo dadka ku xeeran. Badanaa, waxay si qalad ah ugu fikiraan inay jecel yihiin inay jiraan dad kale dartiis, ama inay caawiyaan qof walba. Ma aqbali karaan inaysan garaneyn sababta ay u jiraan, haa? Had iyo jeer waxay rabaan jawaab. Taasi waa dabeecadda xayawaanka loo yaqaan 'aadanaha.' - Magata Shiki
Ei Sei Quotes (Boqortooyada)
Dadku waxay ku dhacaan mugdi maxaa yeelay waxay lumeen dabeecadda dhabta ah ee iftiinka dhexdooda ku jira. Awoodin in la helo iftiinkaas si ba'an ayay u foorarsadaan iyagoo silcaya xanuun, kaliya inay dhalaan musiibo. Ma jiro wax sabab ah oo masiibo ka weyn, ma jirto ilo mugdi oo ka weyn, dagaal. ” - Ei Sei
Kazuki Kuwanomi Quotes (Xusuusta Caaga)
“Taasi waa dabeecadda aadanaha. Waxaan ka qoomameynaa, oo waxaan sii wadnaa eedeynta weligeen. - Kazuki Kuwanomi
Xigashooyinka Minori Kushieda (Toradora)
“Dadka qaarkiis jacaylku wuxuu la mid yahay dabeecadda labaad, laakiin xitaa lama xiriiri karo taas. Marka hadaanan waligey jacayl horay u qaadin ma runbaa? Taasina waxay iga dhigaysaa inaan la yaabanahay haddii cirfiidku run yahay. Weli ma arkin midkood markaa malaha ma ahan. - Minori Kushieda
Xigashooyinka Yuzuru Shino (Toddoba maalmood)
“Waa dabeecadda aadanaha in lagu xukumo muuqaal ahaan. Ma ahan oo keliya ragga kuwa dusha ka sarreeya. Qofna kuma dhibo waxyaabaha uusan arki karin… sida qalbiga oo kale. ” - Yuzuru Shino
Isha sawirka: Yuzuru Shino Zerochan
Xigasho Orochimaru (Naruto)
'Waa dabeecadda aadanaha in aan la ogaan qiimaha dhabta ah ee shay, ilaa ay lumiyaan mooyee.' - Orochimaru
Annie Leonhart Quotes (Weerarkii Titan)
“Waxaad leedahay si caadi ah, dadka oo dhami way wanaagsan yihiin, haddii ay uun qaadan lahaayeen dabeecadooda, ururkani sidaa uma xumaanayo, sax? Laakiin sidaan qabo, qaab dhismeedka ururka, qaabka loo aasaasay ayaa ah waxa keenaya aragti ku saabsan waxa dhabta ah ee aadanaha runtii yahay. ” - Annie Leonhart
Yoshino Takigawa Xigasho (Zetsuen No Tempest)
Mucjisooyinku waa kuwo aan caqli gal ahayn dabiiciyan. ” - Yoshino Takigawa
Quotes Kawayanagi Tsurezure (Ojojojo)
jeex ugu fiican nolosha jacaylka anime
“Markaan ka fikiro, ma jiraan wax aan ka qaban karo dhaqdhaqaaqayga. Waxyaabaha aan sugaa waa uun dabeecadayda. Waan hubaa in… arrimuhu maalin ka sii fiicnaan doonaan. - Kawayanagi Tsurezure
“Noolaha waxaa xakameynaya silsilado: Shuruucda dabeecadda, qulqulka waqtiga, weelka loo yaqaan“ jirkaaga ”, iyo jiritaanka ayaa loogu yeeray maskaxdaada. Waxaa jira hal silsilad oo kaliya oo dadku isticmaali karaan: EREYADA. ' - Yuuko Ichihara
Xigashooyinka Akiyama Shinichi (Ciyaar Beenaale)
Waa inaad jeclaataa aadanaha. Markii wax waliba ku dhegaan qoraalka, waxay sameyn karaan ficil weyn. Laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee ay wax lama filaan ah u dhacaan, waxay ula falgalaan gabi ahaanba runta dabeecadooda. ” - Akiyama Shinichi
Oomine Daiya Quotes (Sanduuqa Madhan Iyo Zeroth Maria)
'Wax kastoo aad sameyso, meel kasta oo aad tagtid, kama baxsan kartid dabeecadaada.' - Oomine Daiya
Ilaha muuqaalka leh: Gabar Anime ah oo Ku Xeeran Dabeecadda
Xigashooyinka Anime ee ugu Weyn ee ku Saabsanaya Hankaaga iyo Himilooyinkaaga
21 Ka Mid Ah Qodobada Ugu Xun Anime ee Ku Saabsan